निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब लगानी | गृहपृष्ठ
Home लगानी निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३ खर्ब लगानी
काठमाडौं । पूर्वाधार निर्माणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी बढेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को फागुन मसान्तसम्ममा त्यस्ता कम्पनीले पूर्वाधारमा रू. २ खर्ब ९७ अर्ब लगानी गरेका छन् । यो परिमाण गत आव २०७४/७५ को सोही अवधिमा लगानी भएको रकमको १७ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढी हो ।
यी कम्पनीहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जा रू. २७ खर्ब ७९ अर्बमध्ये १० दशमलव ६९ प्रतिशत रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा गर्ने लगानी बढ्दै गएको देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण र विकास गतिविधिमा भएको वृद्धिले लगानी बढ्दै गएको हो । निर्माण क्षेत्रका कार्यहरूलाई थप सहज बनाउन अहिले निर्माण उद्योगहरूले आधुनिक मेशिन तथा उपकरणको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग बढिरहेको र त्यसका लागि आधुनिक यन्त्र उपकरणहरू आयात गर्ने क्रम बढेका कारण पनि यस क्षेत्रमा लगानी बढेको हो । यस्ता प्रविधि भित्र्याउन निर्माण उद्योग तथा कम्पनीहरूले कर्जा लिएर मेशिनरी उपकरणहरू आयात गर्ने क्रम बढेको देखिन्छ । निर्माणसम्बद्ध उपकरणहरू उच्च मूल्यका हुने भएकाले पनि निर्माण उद्योगहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन अग्रसर देखिन्छन् ।
पछिल्लो समय सडक, पुल, सुरुङ मार्ग, आर्च ब्रिज, रेल मार्ग, हाउजिङजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्दो छ । सरकार तथा निजीक्षेत्रको प्राथमिकता पनि पूर्वाधारको विकास सहज होस् भन्नेमा केन्द्रित छ । यस्ता निर्माणका लागि क्रेन, डोजर, एक्स्काभेटर, लोडर, रोलर, भाइब्रोम्याक्सजस्ता साधन तथा उपकरण खरीदका लागि पनि बैंकले कर्जा प्रदान गर्ने गर्छन् ।
अधिकांश वाणिज्य बैंकले निर्माण क्षेत्रका लागि रू. ४ लाखदेखि रू. ३० करोडसम्मको कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । समीक्षा अवधिमा २८ वाणिज्य बैंकले निर्माण क्षेत्रमा रू. २ खर्ब ४२ अर्ब बराबरको कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत आवको पहिलो ८ महीना अवधिको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा प्रवाह भएको कर्जा रकम १४ दशमलव २९ प्रतिशत बढी हो । वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गरेको कुल रकम रू. २३ खर्ब ९९ अर्बको १० दशमलव १२ प्रतिशत लगानी यस क्षेत्रमा गरेका छन् । साथै रू. २ खर्ब २५ अर्ब व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जामा लगानी भएको छ ।
२०७२ सालको भूकम्पपछिको २ वर्ष वाणिज्य बैंकबाहेक विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निर्माण क्षेत्रमा लगानी पहिलेका वर्षहरूभन्दा घटेको थियो । यस वर्ष भने यी कम्पनीहरूको लगानीमा सुधार भएको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा ३३ ओटा विकास बैंकले रू. ४४ अर्ब ८५ करोड निर्माण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको छ । २४ ओटा वित्त कम्पनीले भने यस क्षेत्रमा जम्मा रू. ९ अर्ब ४५ करोड कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
तस्वीर : बैंकमा सेवाग्राहीको भिड
नेपालको कान्छो र जेठो बैंक